Taliyihii Saldhigga bariga Laascaanood iyo xubin kale oo Xabsiga loo taxaabay | Somaliland.Org
Taliyihii Saldhigga bariga Laascaanood iyo xubin kale oo Xabsiga loo taxaabay
December 28, 2009	Laascaanood (Somaliland.Org)- Ciidamada Booliska ee Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool, ayaa shalay xabsiga u taxaabay Taliyihii Saldhigga bariga Magaaladaas Cabdilaahi X. Siciid Guuleed oo toddobaadkii hore xilka laga qaaday iyo xubin kale.
Sida aanu ka soo xiganay Idaacadda madaxa bannaan ee Horyaal oo Warkan baahisay, Taliyihii hore ee Saldhigga bariga Magaalada Laascaanood Cabdilaahi X. Siciid Guuleed iyo xubin kale oo magaciisa la yidhaahdo Axmed Aw-Cabdi Ukun, ayaa shalay Ciidamada Boolisku Xabsiga u taxaabeen.
Inkasta oo aanay Masuuliyiinta Booliska ee Magaalada Laascaanood si toos ah uga hadal xadhigga labada Xubnood, haddana weli ma cadda sababta xadhiggoodu. Siday Horyaal faafisay Taliyihii Saldhigga bariga Magaaladaas Cabdilaahi X. Siciid Guuleed ayaa xilka laga qaaday ka dib markii uu u waramay Idaacadda Horyaal.
Mar aanu isku daynay in aanu la xidhiidhno madaxda Ciidamada Booliska ee Gobolka Sool, si aanu xadhigga xubnahan wax uga waydiino, ayaanay noo suurtogelin in aanu helno.